2.12.1 Iinguqu ezininzi kwi-interface - Geofumed
Ikhosi ye-AutoCAD 2013
2.12.1 Iinguqu ezininzi kwi-interface
NgoJuni, 2012 Ikhosi ye-AutoCAD 2013
Uthanda ukuzama? Ngaba unomntu onesibindi othanda ukuphatha nokuguqula indawo yakho ukuba uyisebenzise ngokukhawuleza? Ewe, ke kufuneka ukwazi ukuba i-Autocad ikunika ithuba lokuba ungaguquli nje imibala yenkqubo, ubungakanani besikhokhelo sakho kunye nebhokisi lokukhetha, njengoko sichazile nje, kodwa ngokunjalo nazo zonke izicwangciso zenkqubo yomsebenzi. Ungayithandi iqhosha leqhosha elisetyenziselwa ukudweba iirectangles? Sitshintshele kwisithonjana kunye nobuso bukaBart Simpson, ukuba uyayithanda. Ungathandi umyalelo wokubonisa ezinye iinketho? Elula, yitshintshile ukuze umyalezo, ukhetho kunye nesiphumo zihluke. Ungathandi ukuba kukho ifayile ebizwa ngokuthi "Vista"? Yisuse kwaye ufake oko ufuna khona.
Ukufumana elo nqanaba lokwakheka, sisebenzisa "Inkinobho yokuLawula-Umntu-Umsebenzisi". Ibhokisi yokwenza idijithali iya kuvela eya kukuvumela ukuba utshintshe i-ribbon, iibhajethi zeetrafti, i-palettes, njalonjalo. Kucacile ukuba oku kungagcinwa phantsi kwegama elithile, ukuze ukwazi ukubuyela kwi-interface engagqibekanga.
Nangona kunjalo, kumbono wam, ukucwangciswa kwesixhobo esibonakalayo sicwangciswe ngokucokisekileyo ukuvumela uchwepheshe ukuba asebenze ngokusebenzayo kunye nenkqubo, ngokuzimeleyo ukuba umzobo wokwakha, ubunjineli okanye umdwebo wobugcisa obulula. Ndiya kugxininisa: musa ukuchitha ixesha lakho lokudlala kunye ne-interface, nangona kunjalo xa ungasayi kuqonda inkqubo.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-2.12 Ukulungiswa komsebenzisi
Post Next ISAHLUKO 3: AMANQAKU NAMAKHAKATHIOkulandelayo "